“ဘယ်သူလာပို့ပေးမှန်းမသိတဲ့ ချစ်သူများနေ့လက်ဆောင်တွေရလိုက်တဲ့ ဂျွန်လွင်” – Cele Gabar
ဂျွန်လွင်ကတော့ လက်ရှိမော်ဒယ်လ်အေဂျင်စီလောကမှာ အအောင်မြင်ဆုံးလူတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ။အောင်မြင်တဲ့မော်ဒယ်လ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က ပဲ့ကိုင်ရှင်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ရလောက်အောင် လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ်ပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ထားသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ လူချစ်လူခင်ပေါများသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အပြင် ဒီနေ့ချစ်သူများနေ့မတိုင်ခင် မနေ့ကတည်းက လက်ဆောင်ရနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို “V Day အတွက်လက်ဆောင်ရပါတယ်… ဘယ်သူလာပေးတာလဲ? ငါလဲ V Day အတွက်ပို့ပေးသောသူ ကျေးဇူးပါ.. ဘယ်သူလဲတော့သိချင်မိ” လို့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ယူနီကွန်းရုပ်လေးနဲ့ ဂျွန်လွင်ရဲ့ရုပ်ပြောင်ပန်းချီကားလေးအပါအဝင် အခြားလက်ဆောင်လေးတွေကိုပါ ဂျွန်လွင်အတွက် အမည်မဖော်ဘဲ ပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျွန်လွင်ကတော့ အနုပညာလောကရပ်ဝန်းမှာ အောင်မြင်နေတဲ့အလျှောက် ပရဟိတအလုပ်တွေမှာလည်း ပရိသတ်တွေအမှတ်ပေးထားခြင်းကို ရရှိထားသူပါ။မကြာခဏဆိုသလို အမှန်တကယ်အကူညီလိုအပ်နေတဲ့ သူတွေကို ငွေအား၊လူအားနဲ့သွားရောက်ကူညီပေးလေ့ရှိပြီး မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘဝကို ရှင်သန်နေသူတစ်ယောက်ပါ။စေတနာကောင်းသူတစ်ယောက်မို့ လူချစ်လူခင်လည်းပေါများတဲ့ ဂျွန်လွင်ကတော့ ဒီနေ့ချစ်သူများနေ့အတွက် ဘယ်သူပို့ပေးမှန်းမသိတဲ့လက်ဆောင်ရလိုက်ပါတယ်တဲ့နော်။ဘယ်သူပို့ပေးတယ်လို့ထင်လဲ ပရိသတ်ကြီးရေ။
“ဘယ္သူလာပို႔ေပးမွန္းမသိတဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔လက္ေဆာင္ေတြရလိုက္တဲ့ ဂၽြန္လြင္”
ဂၽြန္လြင္ကေတာ့ လက္ရွိေမာ္ဒယ္လ္ေအဂ်င္စီေလာကမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုးလူတစ္ေယာက္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ေအာင္ျမင္တဲ့ေမာ္ဒယ္လ္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က ပဲ့ကိုင္ရွင္လို႔တင္စားေခၚေဝၚရေလာက္ေအာင္ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ထားသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သူကေတာ့ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီေန႔ခ်စ္သူမ်ားေန႔မတိုင္ခင္ မေန႔ကတည္းက လက္ေဆာင္ရေနျပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို “V Day အတြက္လက္ေဆာင္ရပါတယ္… ဘယ္သူလာေပးတာလဲ? ငါလဲ V Day အတြက္ပို႔ေပးေသာသူ ေက်းဇူးပါ.. ဘယ္သူလဲေတာ့သိခ်င္မိ” လို႔ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြကေတာ့ ယူနီကြန္းရုပ္ေလးနဲ႔ ဂၽြန္လြင္ရဲ႕ရုပ္ေျပာင္ပန္းခ်ီကားေလးအပါအဝင္ အျခားလက္ေဆာင္ေလးေတြကိုပါ ဂၽြန္လြင္အတြက္ အမည္မေဖာ္ဘဲ ပို႔ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဂၽြန္လြင္ကေတာ့ အႏုပညာေလာကရပ္ဝန္းမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့အေလွ်ာက္ ပရဟိတအလုပ္ေတြမွာလည္း ပရိသတ္ေတြအမွတ္ေပးထားျခင္းကို ရရွိထားသူပါ။မၾကာခဏဆိုသလို အမွန္တကယ္အကူညီလိုအပ္ေနတဲ့ သူေတြကို ေငြအား၊လူအားနဲ႔သြားေရာက္ကူညီေပးေလ့ရွိျပီး မြန္ျမတ္တဲ့စိတ္ထားနဲ႔ဘဝကို ရွင္သန္ေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ေစတနာေကာင္းသူတစ္ေယာက္မို႔ လူခ်စ္လူခင္လည္းေပါမ်ားတဲ့ ဂၽြန္လြင္ကေတာ့ ဒီေန႔ခ်စ္သူမ်ားေန႔အတြက္ ဘယ္သူပို႔ေပးမွန္းမသိတဲ့လက္ေဆာင္ရလုိက္ပါတယ္တဲ့ေနာ္။ဘယ္သူပို႔ေပးတယ္လို႔ထင္လဲ ပရိသတ္ၾကီးေရ။
“ကျောင်းဆရာမလေး အေးဖြူ အဖြစ်မြင်တွေ့ရတော့မယ့် နန်းစန္ဒာလှထွန်း”
“မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ချစ်ပေးတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အိမ့်ချစ်”
ဖိလစ်ပိုင်ဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ပါဝင်တော့မည့် Nancy